Afaan maali? – Welcome to bilisummaa
bilisummaa March 11, 2015	3 Comments
Jaafar Ali, Norway Irraa
Afaan jechuun, akka saayinsiin afaanii barsiisu tti, waan biraa tokkollee osoo hintahin, mi’a qunnamtii ykn meeshaa ittiin waliigalan, kan ummatootni tokko muuyxannoo hawaasummaatiin hotate ykn gonfate tahuu isaa ti. Haatahu malee roga gara garaa irraa gadifageenyaan hoggaa mil’atamu, afaan mi’a ittiin walqunnaman qofa gadhanii hornoguun nama dhiba. Maaliif yoja’ame ilmi namaa beeyladaa fii busaawaa biraatiin adda bahee beekkamuun uumaa yaaddu waan taheefi. Niyaada hoggaa jennuus namni dura waan beeku yaada. Kana jechuuniis afaan beekuun yaada, akka aadaa isaatti yaada jechuu dha. Kanaaf fakkiin gaariin manaama ykn abjuu dha. Namuu abjuu niarga. Hoggaa manaamu ammoo afaanuma isaatiin malee namni afaan hinbeekneen manaamuu hindandayu. Hayyootni hawaasummaa namni afaan isaatiin yaada hamma ja’an takka irra gayuuniis kanaafi. Ilma namaatiif yaaduun qoftii ammoo gayaa miti. Waan yaadees kaaniif dabarsu qaba. Kanaafuu kan yaadees yaada isa qooduuf, kan caqasuus waan dhagaye san qooddachuuf afaan isaaniitiin walqunnamuun dirqama taha. As irratti namni afaan garagaraa dubbatu afaan lamadaatiin waliigaluu hindandayu jechuu kiyyaa miti. Gam tokkoon warri afaan lamadaa qabu dhibbeentaa hawaasa addunyaatiin hangam takka yojenne lakkooysa darree akka tahe kan wal nama gaafachiisuu miti. Afaan lamadaa qabaachuun ammaas ittiin yaaduufiis tahe ittiin yaada dabarfachuuf matuma galeehuu afaan ofii kan gitu tahuu hindandayu.
Gara biraatiiniis nama tokko waan inni dubbatu iraa ka’uu dhaan hujii isaatiis tahe gita isaa, amantii isaa tii fii aadaa isaatiis, akkasumas nama biyya tamii akka tahee fii saba isaatiis hubachuun, yo hangam xinnaate shalaguun akka dandayamu hayyootni lugaa nibarsiisan. Ulaagaalee ummata tokko akka sabaatti gam tokko luucceysan, ykn saba tokko kaaniin addatti hornogan keeysaahiis tokkoo fii kan duraa afaani. Adaa jechuun akkaata hawaasni tokko waliigala jiruu fii jireenya isaa ittiin gaggeeyfatu eega tahe, aadaan afaaniin alatti ruuhii qabaachuu akka hindandeenye hubachuun nama hindhibu.
Roga seenaa tiin yotahees seenaa jechuun daandii yeroo kan dhalootni tokko bu’aa fii bahee isaatii wajjiin irra as dhufe eega tahe seenaa ofii galmeeysanii dhalootaaf dabarsuufiis tahe warri qubee-maleeyyii tahee turees arraat-aadaa ykn oral traditionii dhaan seeneysuun kan dandayamu yo afaan ofii qabaatan qofa. Ragaa biraa tokko dabaluuf namni hawaasa isaa irraa fagaatee jiraatu tokko qaamaan hanga fedhe yo itti toltellee qalbiidhaan ammoo mjuu tahuu hindandayu. Jecha biraatiin assimilate tahanii jiraachuun dandayamullee eenyummaa laalchisee amoo qurxummii bishaan keeysaa baatete tahuun hinoolamu. Balaa nam-uumtee tahan kanneen sabni tokko muraasaan ykn dimshaashaan baduu itti dandayu ykn genocide keeysaahiis tokko tarsiimoo assimilationii kana hoggaa tahu, namni tokko assimilate tahuu hoggaa jalqabu wanni inni dura dhabu afaan isaati. Afaan isaa dhabnaan adaa isaa dhabe jechuu dha. Ulaagaalee kanneenii fii kkf hoongawe jechuun ammaas uunkaaleen inni an abalu je’ee ittiin ofmoggaasuus waan buxa dhabduuf gabaabdumatti eenyumaan isaatiis achi buutee miila bakar taate jechuu dha. Akka fakkeenyaattiis fagoo osoo hindeemne hiree saba Agaw mudatte qofa maqaa dhahuun gayaa dha. Agaw qofa osoo hintahin Argoobbaa, Harallaa, Gaaturii fii kanneen biraatiis tarreeysuun nidandayama. Kaaba wallootiin hangafee osoo jijjiiramni hammi kun dhufuu baatee sanbi oromootiis carraa gaddisiisaa kana mudachuuf amna jalqabeeti ture. Karaan balaa bifa kanaa irraa dandamachuun ittiin dandayamuus tokkoo fii guddaan afan ofii jiraachisuu qofaan akka tahe kan wal nama gaafachiisuu miti. Kanaafiis faca’insaa fii deebi’anii kasachuu Yahuudotaa qofa eeruun gayaadhaa oli. Akka seenaa isaanii irraa hubachuun dandayamutti yahoodotni balaa bardhibbee hedduu san irraa kabsachuu fii deebi’anii akka sabaatti dhaabbachuu kan dandayan gaafa akka callee cittee tti faffaca’anii turan hunda afaan isaanii tiis dabalatee adaa fii amantii isaanii irratti cichanii tiikfachuu waan dandayaniifi. Bifa kanaan fakkeenyaa fii ragaalee garagaraa hedduu tarreeysuun nidandayama. Walumaagalattuu afaan jechuun hammuma mi’a qunnatii tahe takka ulaagaa eenyummee ummatootaa akka tahees jala muruun haqa qofa osoo hintahin dirqama taha.
Akka seensaa tti hammana eega jenne afaan mi’a hujii tahuun isaatiis haamil’annuu. Afaan ofiitiin hojjachuun hujii anjeeysuu caalaa afaan saniis dagaagsuu dha. Afaan tokko ammaas lakkuma dagaaguun hujii anjeeysa. Afaan hujii hoggaa jennuus ija siyaasaa qofaan kottoonfachiisanii ol’aantummaa gita bittaa ittiin mirkaneeysuu qofatti hornogamuu hinqabu hinqabu. Ijoon barreefama kanaatiif afaan Oromoo akka afaan hujii tti akkamiin hubatama? Gaafii jettuuf yaada hamma tokko gumaachuuf yaaddameetti.
Ruuhii qaqqaalii wareegamtoota qabsoo bilisummaa Oromootiif galatni haagayuutii kaleen ar’aamiti. Gayaa tahuu baatuus Oromoon dur afann isaatiin dubbachuunuu dharraa itti taate ar’a afaan isaatiin hojjachuu mi’eeyfateeti jira. Mirgi kun naannoo Oromiyaa keeysatti akka lamuu ifbooda deebiuu hindandeenyetti habaqaalamuun waan tokko tahee, sadarkaa biyyaattiis yaaduun hinhammaatu. Kuniis kan burqu guddinaa fii wayyabummaa ummata Oromoo irraa ka’uu dhaan sabaa fii sablammoota biraatii wajjiiniis hariiroo gaarii qabaachuun eenyuufuu taanaan hinhammaatu ja’amee waan amanamuufi. Oromoon ummatoota gaafa afriikaa hundaa wajjiin hariiroo gadifageenya qabdu qooddata. Keeysumattuu sadarkaa Itiyoophiyaa tti roga diinaggeey, kan hawaasummaa fii siyaasaatiin tahuus somayyoo ykn utubaa fii dagalee biyyittii sanii taheeti dhaabbataani. Kanaafuu ummatoota biyyittii sanii hundaa wajjiin qunnamtii fii hariiroo fayyaaleysa taate uumuutu irraa eegama. Kun ammoo fedhii fii hawwii gama tokkoo qafaan kan milkaahuu miti. Fedhii fii dantaa gama hundaa irratti bu’uramu qaba. Oromoon akka hangafaa tti tarkaanfii takka fuuldura taree xurree saaquun dantaa ofii qofaaf akka hintahin ammoo beekkamuu qaba. Inumaa oromoo caalaa hariiroo tana irraa kan fayyadamu ummatoota biraati jechuun nidandayama. Gama Oromootiin dantaan ummatoota hundaa taligamuun dantaan Oromootiis taligamuu dha ja’amee ti amana. Ummatootni kuuniis amantaa akkasii qabaachuutu irraa eeggama. Kana jechuun, Itiyoophiyaa keeysa tti kan Oromiyaa hinjaalanne nijira jechuu fii miti. Lafa osoo hintahin ammoo jaalatamuu, barbaadamuu fii kabajamuu kan qabu ummata oromooti. Kanaafuu ummatootni biyyittii san keeysa jiraatan oromoo wajjiin hariiroo gadifageenya qabdu uummachuutu irraa eeggama. Kana godhuun isaanii oromoo hinmiidhu. Isaan ammoo nifayyada. Afaan Oromoo dubbachuun ammaas Oromoo wajjiin hariiroo hujii uummachuu fii cimsachuuf gargaaruu caalaa hariiroon sun akka waartuus taasisuu nidandaya. Fakkeenyaaf caasaa federaalaa keeysatti humniti namaa muraasa tahullee afaan oromoo afaan hujii yotahe, Oromoon mootummaa federaalaa keeysatti daran akka hirmaatu nigargaara. Hunda caalaa ammoo ummatootni biyyittii sanii naannoo oromiyaa bal’oofii badhaatuu keeysatti bobbahanii akka hojjatanii fii ittiin gargaaraman isaan dandeeysisa. Haalli kun ummatoota hunda caalmayaan walitti hidhuu dhaan tokkumaan biyyittii dhaa akka waartullee sababa tahuu nidandaya. Kana jechuun afaan Amaaraa hanqisanii Afaan Oromootiin bakka buusuu jechuu akka hintahiniis hubachuun barbaachisaa dha. Biyya takka keeysatti afaan ummata wayyabaa afaan hujii tahuun mirga sadarkaa addunyaatti fudhatamee ittiin hojatamaa jiru malee Itiyoophiyaa qofaaf kan karoorfame akka hintahiniis dagatamuu hinqabu. Biyyotni afaan hujii lamaa fii sanii ol qabaniis akka jiran hubachuun barbaachisaa dha. Kun tahuu dhabuun ammoo balaa silaa sodaatamtu san yoshaffisiise malee hinhanbisu . Gabaabdumatti Oromoon osoo mirga muraasotaa hinmiine mirgi wayyabummaa isaa akka kabajamuuf hawwa. Hawwuu qofa osoo hintahin kabajoomfachuufiis niqabsaawa. Kana jechuun ammoo oromoon akka Sirna habashootaa sanitti afaan isaa humnaan ummatoota irratti fe’uuf fedhii qaba jechuu miti. Garuu karaa mirgi isaa osoo hinsharafamne itti kabajamu barbaaduun isaa hin oolamu.
Miilanaan oromoo fii afaan oromoo laalchisee sodaa jirtu takka takka mimil’achuuniis barbaachisaa dha. Gaafa yaadni kun dhawwaaquu jalqabe irraa kaasee sodaan guddoon kan callaqifte garee hanbaa sirna dabree tahan warra ammallee Brdh 21fa keeysatti biyya takka, alaabaa takka, amantii takka fii afaan tokko jechaa dhama’u irraahi. Ka’umsi isaaniitiis kan duraa tuffii ummataaf qaban hoggaa tahu yo mirgi akkasii dhugoome empiriin teenya nifacaati, empiriin facaanaan ammaas waan saamnu dhabna, siyaasaa jettu, siyaasaa booyyee tan Hassan Alii baanu saniin jaamuu dhaani. As irratti ammoo Nafxanoyoota malee, ummata Amaaraa bal’aa fii kabajamaa akkaan hinbaanne akka naaf beekkamuun dhaammachuu barbaada.
Sodaan lamadaa tan murna biicuu amma biyya bitu kanaati. Murni kun akka imaammataa tti mirgoota bifa kanaa laalchisee rakkoo dilasii qabaachuu baatanille, hiree seenaa tahee yeroofillee tahu, angoon siyaasaa harka isaanii waan galteef carraa kanaan saammachaa turuuf jecha yaada kana ammaaf fudhahuun isaan dhibeeti jira. Sodaan isaanii guddoon oromoon carraa kanaan daran humna tahee akka isaan dura hindhaabbane bir’achuu hoggaa tahu, Fakkeenyaaf sadarkaa biyyaaleysaatti afaan oromoo afaan hujii yotaasifame presidenticha intalishee tahee taa’uus dabalatee keeysumattuu qondaala qondaallanii ykn muummicha ministeeraa irraa kaasee ministeerotaa fii irreeyyiin waraanaa ol’aanoon biyyittii afaan hujii kan mootummaa Itiyoophiyaa lamaanuu dubbachu qaban ulaagaan jetu dhufuun waan maluuf seera kanaan hornogamanii angoo diriirfatanii ittiin saaman tana irraa kottoonfachuun akka isaan hinmudanne eeggannaa gochuuf akka tahe shalaguun nama hindhibu. Kuniis shira wayyaanotaa malee rakkoo ummata tigraay akka hintahin beekamuu dha qaba. Amala mooteeqorkummaa isaanii irraa kan ka’e wayyaanotni waan gama isaaniitiin dhufu malee hamma fedhe murteeysaa tahuus yaada gara biraa fudhachuuf uumaan isaanii hinhayyamuufi. mirgoota ummataa shasharafanii akka badhaasaa ti tokko tokkoon gumaachuudhaan gaafa muddaman rakkoo yeroo sanii keeysaa ittiin ofbaasanii umrii angoo isaanii dheereyfachuuf waan ittifayyadamaniif amma tahuu baatulle gaafa waxxannaan isaan qabatte, afaan oromoo qofa osoo hintahin kan isaaniitiis dabalanii, afaan mootummaa sadeen keeysaa lama kan dubbatu angaahuu nidandaya kan ju’uun seera mejjeeyfatanii tooftaa siyaasaatiif itt dhima bahuun isaanii akka malu shalaguun nidandayama.
Rakkoo dilas madaala kuffistu tahuu baattullee olola baroowaniif gabroomfatootni habashaa tamsaasan, keeysumattuu tarsiimoo wayyaanotaa tan ummatoota gargar dhilliyanii bituuf ololchaniin sabaa fii sablammoota aalii oromoo tahan hedduu keeysatti sodaan bu’ura hiqabne akka uumamtu carraaqqiin hingodhamin hinjirtu. Roga kanaan garuu, waliin jiraachuu daran waliin gabroomuu irraa kan ka’e ummatootni empira sanii fira malee abadan diina oromoo tahuu akka hindandeenye mirkaneeysuufiis tahe olola diinaa masheensuuf, adeemsa qabsoo bilisummaa oromoo keeysatti xiyyeeffannaan gayaan kan laatameef natti hinfakkaatu. Kanaafuu jaarmayoota siyaasaatiis tahe qaamowwan taligaa oromuu gaggeeysaa jiran hundi qaawa kana cuqqaaluuf irra daddeebi’anii itti yaaduu qaban amantaa jettuun qaba.
Xumura irrattiis haala qabatamaa ar’a keeysatti argamnuun, xiyyeeffannaan Oromoo tahuu kan qabu afaan oromoo afaan Itiyoophiyaa taasisuuf osoo hintahin, mirgi roga kanaan Oromiyaa keeysatti gonfatame akka hinshasharafamne tikfachuu fii daran jajjabeeysuu dha. Afaan oromoo afaan oog-barruu, afaan siyaasaa tii fii afaan qorannaa saayinsi akka tahu dandeeysisuu dha. Akkaataa kanaan bal’ina naannoo kanaa tii fii guddina ummata kanaatii wajjiin Itiyoophiyaa qofaaf osoo hintahin sadarkaa gaafa Afriikaa tti afaan barbaadamaa tahuu akka dandayu carraaqqii addaan hincitnee fii walfaannoomii qabdu godhuutu feesisa. Oromoon tokkummaa hinbalfu. yomuddattees kuta bahee mirga isaa gonfachuuf eenyuyyuu caalaa carraa akka qabuus osoo hindaganne bifa qaroomeen sossoohuutu barbaachisa. Keeysumattuu dhalootni qubee yeroo fii seenaan amaanaa ulfaattuu akka isaan irratti jiiyse hubatanii tii fii mul’ata dheeraa sinqeeyfatanii qabsoo dhaaluutu irraa eeggama.
Injifannoon ummata oromoo tiif!!
Bitooteysa 11, Br 2015
Jafer Ali Hassen
Tags afaan Jaafar Oromoo
Previous Oromo TV:First Oromo Police.
Next Strengthening Initial Goal Beautifies The end.
Yaa kha Rabbi, oromoon numa hiyyoomtee bar, gaafaa radio Harar kheysaa si dhabdee. Yaa jala kheenya ummanni Oromo laberariin isaa sumaa faa akka taatee beytaa?
Yaada akkanaa khana ummanni kheenya barnoota guddaa akka irraa argatu mama hinqabu, waan dansaa brreysitee itti fufii jabaadhu.
Barnootni laattan gaarii ta’ee sirni qubeessuu keessanii ni hafa kana sirreessaa
Qubeen otuu sirratee gaarii ture barumsichi baay’ee gaariidha!